Matipi mashanu anonakidza ekuti uwane zvakazara kubva kuMhando yako | Gadget nhau
Villamandos | | vaverengi
Nhasi iyo Amazon Kindle Ivo vangango kuve eanonyanya kuzivikanwa maReaders kana emagetsi mabhuku pamusika, nekuda kwekuwedzera kwavo dhizaini, hunhu uye maratidziro, asi pamusoro pezvose uye muzviitiko zvakawanda nekuda kwemutengo wavo. Parizvino pamusika pane mhuri hombe yemidziyo inowanikwa, inowanikwa kune chero mushandisi uye iine akasiyana siyana mashandiro uye maratidziro aunogona kusarudza zvinoenderana neyako nyore.
Kana iwe uine Kindle Oasis, iyo Kindle Voyage, iyo Kindle Paperwhite, yakakosha Kindle kana kunyange imwe yeiyo imwe Kindle yakatangwa neAmazon munhoroondo yayo yese, nhasi tiri kuzokuratidza Matipi mashanu anonakidza ekuti uwane zvakazara kubva kuMhando yako kubva kuAmazon, uye kuti iwe unogona zvakare kuwana kushandisa kwakanyanya mairi, kwete chete kuti uverenge akasiyana mabhuku edhijitari.
1 Tumira chero peji rewebhu kune yako Kindle
2 Tumira bhuku redhijitari kune yako Kindle kuburikidza neemail
3 Kweretesa bhuku redhijitari kune chero waunoda
4 Tora skrini pane yako Kindle
5 Dzorerazve yasara nguva yekuverenga yebhuku
Tumira chero peji rewebhu kune yako Kindle
Sezvo ini ndakatenga yangu Kindle chishandiso makore mashoma apfuura, imwe yesarudzo iyo yandinofarira zvakanyanya kugona tumira chero peji rewebhu kuchinhu changu cheAmazon, kubva ku smartphone yangu kana kunyangwe kubva pakombuta yangu, kuverenga gare gare.
Pane dzakawanda nguva mukati mezuva ndinotumira zvinyorwa zvinondinakidza kuverenga pandinorara pasofa manheru ega ega uye kwandinogona kuverenga zvakanaka pasina kusiya maziso angu, uye pamusoro pezvose nerunyararo.
Kuti ukwanise kushandisa hunyengeri, zvese zvaunofanirwa kuita kuisa iyo yekuwedzera Tumira kuna Kindle mune yako Google Chrome browser. Ehezve, kuti ugone kuverenga izvo zvinyorwa zvakatumirwa kune yako Kindle, iwe unofanirwa kuve nazvo zvakabatana kune network yemasaiti uye kuwiriranisa iyo kuitira kuti igamuchire nhau mazuva ese.
Download - Tumira kuna Kindle
Tumira bhuku redhijitari kune yako Kindle kuburikidza neemail
Amazon Kindle ndechimwe chezvishoma zvigadzirwa pamusika izvo zvisingashandise epub fomati yemabhuku edhijitari, kusarudza kubva panguva yekare yeAZQ. Izvi zvinosanganisira kusagadzikana kwekushandura ma-eBooks pazviitiko zvakawanda kuti ugone kuanakidzwa nawo pachigadzirwa chedu kubva kukambani inotungamirwa naJeff Bezos.
Kuti uite kudaro, pane zvakawanda zvingasarudzwa zvakadai seCaliber, asiwo mukana wekutumira chero bhuku kana gwaro kuburikidza neyedu email, kuigamuchira yatoshandurwa kuita fomati inoenderana neyedu Kindle. Kana iwe uchida kuita hunyengeri uhu, unofanirwa kungoisungirira uye kuitumira kukero yeemail iyo yega yega Kindle yawakapa uye iyo iwe yaunogona kuwana mune ruzivo rwechishandiso chako kana kubva kuAmazon webhusaiti, kubva kwaunogona kubata yako zvishandiso.
Kweretesa bhuku redhijitari kune chero waunoda
Kana iwe waifunga kuti nekuti iwe une Rudzi iwe waisazokwanisa kusiya maEbooks ako kune chero shamwari kana nhengo yemhuri, iyo mhando iyo isingakudzorere iwe mabhuku kana kuidzosera kwauri kwauri makore mushure mekukweretesa. ivo, warasika kwazvo. Uye ndizvo kubva kune chero eAmazon e-bhuku tinogona kukweretesa bhuku redhijitari kushamwari kana nhengo yemhuri, pasina dambudziko, kunyangwe izvo zvisiri nyore sekunge raive bhuku riri muchimiro.
Kuti ukwanise kukweretesa bhuku, rinofanirwa kuverengerwa mune rondedzero iyo Amazon inowanika kune chero mushandisi uye inosanganisirwa mukati me «Kukweretesa Kunogoneswa» sevhisi. Chero bhuku rine meseji iri rinogona kupihwa chikwereti kwevhiki mbiri uye zvachose mahara. Zvikwereti zvinoitwa kubva papeji Chengetedza yako Amazon Kindle, paunongofanira kuratidza bhuku raunoda kukweretesa uye kuna waunoda kurisiya kwemavhiki mashoma.
Amazon yakatozivisa kuti iri kushanda mukugadzira ayo ese emadhijitari mabhuku akweretwa kune chero shamwari kana nhengo yemhuri, kunyangwe parizvino zvinoita sekunge pachine nguva yakareba kuti izvo zviitike, zvirinani nenzira yepamutemo.
Tora skrini pane yako Kindle
Imwe yematanho anonyanya kufadza atinawo paMhando yedu, uye kuti vashandisi vazhinji vasingazive zvachose, kugona kutora skrini inotibvumidza, semuenzaniso, kuchengetedza yakatarwa peji rebhuku ratiri kuverenga zvachose.
Zvichienderana neshanduro yeMhando yatinayo, iyo skrini inoitwa neimwe nzira kana imwe. Muchidimbu fomu pazasi tinokuratidza iyo maitiro ekutora skrini pane akasiyana mavhezheni eAmazon eReader;
Yekutanga Kindle, Kindle 2, Kindle DX, uye Kindle nekhibhodi: kutora skrini isu tinofanirwa kubatisisa pane iyo keyboard Alt-Shift-G
mutsa 4: Dhinda uye ubatise bhatani repamba uye bhatani rebhodhi panguva imwe chete
Kindle Kubata: kutanga isu tinofanirwa kubatisisa bhatani rekutanga tobva tibata skrini kuti titore skrini yechiratidziri
Kindle Paperwhite, Mutsa (2014)Aya majaira maviri haana chero bhatani repanyama saka Amazon yaifanira kufunga nezve imwe nzira yekutora skrini. Kana isu tichida mufananidzo weizvo zvatiri kuona pachiratidziri, zvichave zvakakwana kuti panguva imwe chete tinyore maviri akatarisana emakona echiso
Kindle Voyage: isu tinogona kutora skrini senge iri muPepawhite nekubata pamwe chete makona maviri akatarisana echiratidziri
Kindle Oasis: iyo skrini inoitwa sezvakangoita paRwendo nekutepa iwo maviri akatarisana emakona echidzitiro panguva imwe chete
Dzorerazve yasara nguva yekuverenga yebhuku
Imwe yemabhenefiti makuru anopihwa nemabhuku mazhinji emagetsi pamusika, kusanganisira Kindle, ndiyo mukana wekuona nguva dzese uye patiri kuverenga, nguva nemapeji atinoda kupedzisa bhuku. Kuratidza iwo mapeji atinoda kuti tipedze bhuku racho hakuna kunyanya kuomesa chero chinhu, asi kuverenga nguva yatinoda kupedzisa chimwe chinhu chiri nyore.
Mhando yekutiratidza nguva ino yakavakirwa pakumhanya kwekuverenga uye pane mamwe maalgorithm ayo angangove asina anonzwisiswa, kunze kwekunge tichifungidzira asinganzwisisike Amazon anovandudza. Nehurombo, izvo zvakare hazviwanzo kushanda zvakanyanya mune mamwe maEbhuku, kunyanya ayo akatengwa kunze kweAmazon.
Neraki, hapana dambudziko rakawandisa kutangazve iyi account kubva panguva yatasara nayo kusvika kumagumo ebhuku. Kuti tiite izvi isu tichafanirwa kuvhura iyo yekutsvaga injini yeMhando yedu kuti kana usati wamboishandisa iri pamusoro pechiso, uye nyora "; ReadingTimeReset" inoremekedza semicolon yekutanga uye nemavara makuru.
Usatombo kunetseka kuti hapana meseji kana mhedzisiro ichaonekwa, nekuti zvachose hapana chinoratidzwa asi kaunda ichagadziriswa, zvinova ndizvo zvataida kuita.
Pane here ehumwe hunyengeri hwakakubatsira iwe kusvina zvishoma kana yako Kindle kifaa ichienderana?.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Gadgets » vaverengi » Matipi mashanu anonakidza ekuti uwane zvakazara kubva kuMhando yako
3-yechipiri vhidhiyo inokiya iPhones kana iPads
Chuwi Hi10 Plus ongororo neyekunze keyboard